12 de julho de 2020 – Contos de Sacanagem
Sexo quente /Hot sex/Firaisana mafana/गर्म सेक्स /热性
Noite de cinema / 电影夜 /फिल्म देखने की रात /Alina sarimihetsika /Movie night
Morena montando um pau / Brunette riding a cock /mitaingina hazo / एक छड़ी की सवारी /骑着棍子
Cavalgando um pau / कैवलगंडो उम पौ / 骑鸡巴 / Mandeha dick / Riding a dick
Fodendo a menina / Fucking the girl / 他妈的女孩 / लड़की को चोदना / Mandoka ny zazavavy
EATENO AVY AN’ANDRIAMANITRA PAUZUDO
Efa ela aho no nikasa ny hanangona transitite. Nitsahatra ny fanemorana noho ny fepetra sasantsasany tokony hitranga: ny vadiko mandeha, mahita tranokala transvestite tsara, effeminate ary mavitrika sy pasifika, izay nanatrika ny maraina, tsy nanana frills ary tena nasiaka tokoa. Nandritra io fotoana io dia nandeha nikaroka ireo sokajy aho, niantso ary rehefa nahita zavatra mahaliana dia nitsidika olona manokana aho ary nandoa ny vidin’ny fivoriana iray mba hahitana raha marina ny maha izy azy, rehefa nahita fanomezana iray aho, dia nanao programa am-bava mba handinihana ny haben’ny fitaovana. Tsy mila zavatra tsy ampoizina akory aho tamin’izany, satria nikasa izany ho daty mahafinaritra sy mahafinaritra tokoa aho.
Taorian’ny antso an-telefaona maromaro, nanontany momba ny toetra ara-batana, ny haben’ny akoho, ankoatry ny zavatra hafa, nony farany aho dia nahita ilay fitambarana izay tiako indrindra. Renata no anarany, mipetraka ao amin’ny tanàna akaiky ahy izy, 180 metatra ny halavany, mangidy ny nonony, mandanjalanja, mahitsy sy mainty ny volony, noho ny hazavana, volon-koditra, misy marika bikini kely, toy ny gym izay sitrana. tongotra matevina sy volontany 23 cm, izay nahafahako nikotrana sy nandrefesana rehefa mafy. Mavitrika sy mavitrika izy, nanoroka ny vava, tsy nisy frills, nilaza tamiko izy fa nankafiziny ary dia tena nibolisatra sahady tamin’ny fivoriana mialoha.
R $ 100.00 ny vidiny mialoha ny programa. Nanolo-kevitra aho ny handoa ny $ 100.00 mialoha ny vola R $ 100.00 araka izay tadiaviny ary R $ 100.00 hafa raha mahafa-po ahy izy, dia nanao ahy tamin’ny fivorianay. Nihomehy tena ratsy izy ary nilaza tamiko fa hitahiry mandritra ny maraina iray manontolo, ho ahy manokana, fa hanome ahy fifanarahana tanteraka izy ka ho tiako aminy. Tamin’izay rehetra efa nomanina, dia tonga ny fotoana rehefa tsy nijanona roa andro ny vadiko nandritra ny fiofanana orinasa.
Nolazaiko tamin’i Renata ny tolakandro teo ary tonga tany amin’ny 8 ora maraina aho. Narahaba ahy izy rehefa efa nifanarahantsika: mandro, mitafy saribakoly mainty kely misy tady spaghetti izay mipaka hatrany ambanin’ny fehiny, panta mainty mainty kely, mametaka glider, mandevina daholo ao anaty valahany ary mameno ny seho. bra mainty hanokatra eo aloha. Ny volon-dohany dia nofatorana tamina ponytail, tsy misy makiazy sy fofona manitra.
Izaho dia nandro, namiratra ary nandro tena mafana. Efa hainy fa te hanana fandaharana feno hipoka sy oroka aho, mba hananako firaisana matotra ary tiako ho fihinany tokoa izany amin’ny fotoana rehetra, amin’ny toerana rehetra fantany sy vitany.
Vantany vao niditra aho dia nakatony ny varavarana ary nandoa vola ilay filaharana. Avy eo dia nanosika ahy tamim-pilaminana teo amin’ny rindrina izy, nanoroka ahy mahafinaritra avy eo am-bava ary avy eo dia nidina niaraka tamin’ny lelany nidina teo am-bavako ny lelany, izay hoy izy: ankehitriny tiako ianao hahatsapa ho toy ny lehilahy maniry indrindra eto ambonin’ny tany. tsikelikely dia ho tsapanao toy ny mihetsiketsika ary mihinana amiko. Io fitenenana io sy ny lelany teo amin’ny vozoroko sy ny sofiko dia nahatonga ahy nihontsona hatrany an-doha ka hatrany amin’ny tongotra.
Tsy nandany fotoana izy, dia nesoriny ny akanjoko, nidina niaraka tamin’ny lelany mahay teo amin’ny vatako izy ary nifoka teny amin’ny fivavako. Ny nifandray tamin’ny lelany taminy dia nahatonga ahy nihorohoro sy nameno fatratra azy. Raha mbola minono izy dia nanokatra ny fehikibo, ny bokotra pataloha, zipper ary nampidiniko ny patiko. Nentiny tany amin’ny akoho ny vavany, izay efa mafy loatra tao anaty ny akanjo ambanin’izy ireo ary nanomboka nanikitra azy kely izy mba hampahatezitra ahy, ka dia nazerany moramora ny akanjo ambanin’akanjony, namelatra ny vazaha izy ary notsatohany izany, nitodika ahy vao mainka.
Notohizany, nitazona ny lamban-trandriko hatrany an-dohalika izy, nitazona ahy tamin’ny boriky, niaraka tamin’ny tanana iray teo anelanelan’ny andriambavy tsirairay avy, nisintona ahy izy ary nisintona ny diako tsy nampiasa ny tanany. Nanome ahy blowjob mafy sy be fitiavana ary malefaka izy. Tsy maika izy, nahatsapa fa toy ny gilasy ny diariko ary te hanandrana azy io ny santimetatra rehetra. Ny hafanana sy ny hatsasaky ny vavany manodidina ny ranomasoko dia matsiro. Nierona ny filana sy ny fahafinaretana aho.
Tsy nijanona mitsako aho ary tsy nanendry ny vavako tamin’ny tanany, notarihiny aho ary nesorin’izy ireo ny trosirako, indray mandeha, avy eo ny kiraroko, dia nesoriko ny pataloha sy ny akanjo ambany, ary namela ahy fotsiny ny akanjoko, izay izaho na dia nesoriko haingana izany, dia niboridana farany. Tsy nitsahatra nifoka intsony i Renata ary nilaza tamiko hoe: hataoko tonga ao am-bavako ianao aloha, ka rehefa mihinana anao aho dia mbola hihinana ela kokoa ary ho bebe kokoa ny fotoana hahafaly anay. Hohaniko betsaka sy henjana ianao, araka ny nolazainao tamiko.
Nitsangana teo anoloako izy, izay mitsako ahy dia nanangana ny tongotra iray ary napetrany teo ambony lohaliny.
Avy eo izy dia nitsahatra nifoka ahy, nahazo doka, izay tsy fantatro hoe taiza na avy taiza izy, dia nametaka ny rantsan-tanany roa, avy eo nitady tamim-pahakingana sy tamim-pitiavana ny fidirana tao amin’ny ramboko izy, izay nibosesika tsy nahy, tamin’ny alàlan’ny fifandraisan’ny rantsan-hatsiany. ary molaly.
Renato indray ilay vavako tsy namihina azy ary ninono be dia be aho. Tena tsy azo inoana izay azony natao ary azony natao, satria afaka nitelina azy mora, saika feno izy, ary avy eo niloa-bava avy tao am-bavany, mandra-pahatongan’ny glants fotsiny sisa tavela, niaraka tamin’ny fotoana nanombohan’ny rantsan-tananany mikaroka anatiny. ny ramboko, izay nangetaheta ho malama.
Rehefa nanomboka niditra ny ampondrako ny rantsan-tananany dia feno ny faniriana tanteraka aho, na dia nahatsapa fahasosorana kely aza aho, tamin’izao fotoana nanombohan’ity tsofoka ity. Raha tsy nijanona izy nitaiza ahy ary mbola tsy nikasika ny tanany teo am-bavako, dia nampiditra tsikelikely izy ary nampiditra tsikelikely ny rantsan-tanany ho ao amin’ny ampondrako, izay nanokatra sy nampiditra azy tao anaty, tamim-pitiavana sy fahafinaretana, mandra-pahatongan’ny farany efa lasa diso tanteraka mihitsy izy ireo tao anatiko.
Renata dia nanao fiverenany tamin’ny rantsan-tanako teo amin’ny ramboko, izay nihanangam-pitiavana, nahatonga ahy ho tratry ny fahafinaretana ary nahatonga ahy hitoloko kokoa noho izany, satria ny fahatsapana nahatonga azy ireo niditra sy nandao ahy dia tena nahafinaritra, tamin’izany fotoana izany. fotoana tsy nanaovako tsikombakomba izay tena mahafinaritra ahy izay nataoko teo amin’ny akoho namiko, izay efa ela dia taratry ny filàzako tsapako.
Tena mahavariana ny fahaizan’i Renata, satria nitaiza ny diako izy, avy hatrany an-doha ka hatreny amin’ny afovoany, nanao fiverin-dàlana sy mivoaka miaraka amin’ny vava mafana izy, nefa tsy nikasika izany tamin’ny tanany, tamin’ny fotoana izay nametrahany azy ny rantsan-tanako, izay efa sahirana manodidina azy ireo, izay tonga dia niditra, avy ao an-damosiko ary efa naniry fatratra ahy ny zakariny, nanontany tena hoe manao ahoana izany rehefa tonga ny 23 cm aho.
Avy eo i Renata dia tsy nitsoka ahy intsony, nanala ny rantsan-tanany teo amin’ny ampondrako ary niteny hoe: andao isika handeha amin’ny farafara, te-hamarana ny ampitson’ny sakaizanao aho, mampitony anao amin’ny voditongotr’alika aho, satria hataoko matsiro tokoa ianao. Nitsangana izy, nosintona ny tànako, nankeny amin’ny sola, napetrany tamin’ny antsasaky ny fipetrahana aho, ny antsasany nandry teo, ka ny tohako no notohanan’ny lamosiko, fa ny ampondra kosa no notohanan’ny sisin’ny sofa. Nasainy nitaiza ny tongotro aho, toy ny akoho amam-borona, ka vao voalohany nikasika ny ranomasoko tamin’ny tanany, sady nanosika ahy tamim-pitiavana izy. Nitsiky izy rehefa nanao izany ary nilaza tamiko hoe: Hampifalifaly anao aho, miomehy hahatanteraka ny fanirianao sy ny nofinofinao.
Ka nanondraka ny rantsan-tanany telo i Renata, nametraka azy teo am-baravaran’ny ampondrako ary nangataka fanampiana aho, nampitony ny peratra keliko, nanakodia ny valahany tamin’ny lalan’ny rantsantanany, mba hanampiana azy hampiditra azy ireo ary handeha hisono ny zaza fanindronana. Mahatalanjona ny fahatsapana nampahatezitra ahy, dia nitoloko tamim-pifaliana aho, ny zakariko sy ny borikiko nidina tamina an-tsitrapo, ka dia nanomboka nikorotsaka moramora teo amin’ny rantsan-tanany aho, te-hahatsapa azy ireo indray.
Nandeha tamim-paharetana azy izy, namadika azy ireo ho ahy ary rehefa niditra izy ireo dia nanatombo ny ampondrako handray azy ireo. Nirohiko bebe kokoa hatrany izy ireo, satria tena matsiro izany ary izany, dia nanosika ny rantsan-tanan’izy ireo ho lalindalina kokoa aho ary niditra lalina tao amin’ny nifiko mamy, izay naniry azy ireo hatramin’ny farany tamin’io fotoana io. Tsapako fa nisokatra sy nanalehibe ny lahako nandray azy ireo rehefa niditra tao izy ireo. Mahatsiaro ho tsara kokoa noho izany, raha tsy hoe nandevina tanteraka sy niditra tao anaty ahy ny diabinao.
Nitaraina tamin’ny filan’ny faniriana aho, raha notarihin’i Renata ny rantsan-tanany telo teo amin’ny ampondrako, hanitatra azy io sy hanomezana aina azy, hanomanana izany amin’ny ho avy manaraka. Rehefa farany, ny rantsan-tanany telo dia nijanona tao anatin’ny ampondrako, i Renata dia tsy nitsoka ahy nandritra ny fotoana fohy ary nilaza tamiko hoe: vonona ny tsiron-tsakafo, ny borikinao dia vonona amin’ny dick-ko, ankehitriny dia hataoko tonga matsiro ianao, satria rehefa mihinana anao aho dia tsy Tiako ho avy ianao raha vao mametraka ny diakiko aminao aho, toy ny fanaon’ny ankamaroan’ny lehilahy, rehefa omena transitite izy ireo.
Nataon’i Renata tamiko ny rantsan-tanany telo, nanomboka nanodina azy ireo toy izany aho. Nofonosiny tamin’ny vavako indray ny vavany. Nahatsapa ny hafanan’izy ireo nanodidina ny akoho aho, izay natelin’ny tsikelikely. Dia mihamitombo ny hafainganam-pandehany sy ny hamafin’ny pasiso. Amin’ny tanany iray, dia nitazona ny fototry ny akoho aho, ka noparitany tanteraka tamin’ny fahafinaretan’io vava io, niaraka tamin’ny lafiny iray, nitazona rantsan-tanana telo tao anaty ampondrako izy, nampody azy ireo tao anaty ahy, namokatra fahatsapana mbola tsy nahitana, saingy nahatonga ahy ho adala ary izy no hampandeha ahy.
Ny lamosin’ny lamosiny sy ny vavany teo amin’ny dieriko dia nanadino azy, fantany ny zavatra nataony ary tena matihanina tokoa izy. Votsotra aho, tsy misy dikany ary noho izany saka izany, izay nanana moka be ary iza no hihinana ahy manaraka. Tsy nahatohitra ny fihantsiana toy izany aho ary resy tamin’ny cumshot matsiro. Nanomboka tamin’ny masoko ny fahafinaretana, izay nateraky ny fihetseham-po nateraky ny rantsan-tanany teo amin’ny ampondrako ary namindra ny vatako, nahatonga ahy ho henjehina, nihamafy, mandra-nanombohan’ny akoho nanombatombana, ny ampondrako hamaivay, onjan-taitra iray. Nidina tao anaty vavany ny fahafinaretana ary nirotsaka tao am-bavany ny jet de légétres voalohany, izay tsy nijanona nikatona ny diako tao anatin’ny segondra, mandra-paha-tsy nisy na dia iray aza minono mamirapiratra, manondro fa lasa tanteraka ny fifaliako.
Renata dia naka ny rantsan-tanany avy tamin’ny ampondrako sy ny akoho avy teo am-bavany, tonga teo am-bavako aho ary nanoroka ahy, efa tsy tao am-bavako akory izay, fa mbola miaraka amin’ny tsirony. Hoatran’ny hoe te hitelina ahy an’io oroka io izy, dia nitazona ny lelany teo am-bavako, malemy. Nahatsapa ny tadiny henjana nikasika ahy aho ary nanery ahy. Avy eo izy dia nanomboka nibolisatra ny voziko, nidina tany amin’ny tenda, nanentana azy ireo nisolo azy, niverina teo amin’ny tenda ary nijanona teo an-tsofiko. Teo ilay elatra dia maivana kely fotsiny, nanome rantsana vitsivitsy ary niteny teo an-tsofiko: izao dia anjaranao ianao hanome ahy fahafinaretana, minono kely ahy, toy ny hoe ny ahy no tsatony farany amin’ny tany, ataovy mafy ny akoho. tena tantely tokoa, mba hampahafantariko anao vetivety foana. Nitsangana avy teo izy ary nitsangana teo anoloako, mbola niakanjo tamin’ny fomba mahafinaritra.
Nitsangana aho, namihina azy mafy ary nanoroka azy teo am-bava. Izy dia aseho, malefaka sy malama ny volony. Raha nanoroka azy aho, dia nalaiko ilay saribakolin’ilay zazakely, namela ohatra tsara tarehy transvestite aho, niaraka tamin’io vehivavy tena izy io, saingy nisy “antsipirihany” lehibe, izay nahaliana ahy be dia be. Somary taitra aho nieritreritra ny hakantony sy ny “be dia be” ny endriny. Niverina tany aminy aho, ary nanomboka namerina ny volany aho. Notsofiko voalohany sy nidina ny sofiny, avy eo dia nidina ny hatoka, soroka aho, mandra-pahatongako teo ampitan’ny tratrany silicone izay ivelan’ny bra. Nitaona aho ary dia natoroko azy ireo.
Niverina nanoroka ny vavany aho ary nanadino ny volony, namoaka ireo silicone mahafinaritra, izay kosa, boribory, manana marika bikini, manondro ho ambony, mendrika ny fialonana amin’ny vehivavy maro. Nikasika azy ireo ny tanako, nahatsapa ny habeny sy ny fahatokiany, nampidiniko ny vavako ary nifoka toy ny zanak’omby iray, ny iray hafa, ny iray avy eo, miezaka ny hankafy an’ireny fahagagana ireny.
Nanohy nametaka ny mavesatra tao amin’io vatana io aho, nandalo ny foitrany, avy eo tonga teo amin’ny panta, izay efa nitombo nitombo. Avy eo i Renata dia nipetraka teo amin’ny sola sy namelatra ny tongony, vao mainka nampalaza azy ny “firaisana ara-nofo”. Nipaingaiko ny ao anaty ny tongony, ny sisin’ny pantonany ary nibontsina ny akomasony, malefaka somary malefaka, antsasaky ny henjana, tamin’ny panty. Nitrona i Renata ary niteny hoe: mandehana kanosy, minono ary anaovy fitomaniana aho, miaraka amin’ny akoho ao am-bavanao! Ho faty aho hahita izay azonao atao.
Hanana ny pantom-ponao aho, miaraka amin’ny fanampiana ataonao, ao anatin’ny fikosihana iray, mitondra anao ho any an-dohalika, ny gravitaly no niahy ny ambiny. Tao anatin’izany no nahafahako nandinika an’io picona io, hetahetan’ny faniriako, eny fa na dia ny antsasaky ny baomba aza efa nanaitra ny habeny. Noraisiko tsara izany ary nanandrana nanisy izany teo am-bavako, rehetra indray mandeha, ho gaga ny fahafinaretan’i Renata, izay nitolom-bidy ihany, raha nahatsapa ny hafanan’ny vavako nanodidina ny akany.
Koa satria tsy dia henjana tanteraka, dia afaka nandika azy aho tamin’ny voalohany. Nataoko teo am-bavako ny lelako ary nahatsapa fa mitombo, mihamafy ary mamolavola endrika ao am-bavako ny phallus. Niharatsy hatrany izany, ny ampahany tsy azoko nitelina no nivoaka avy tao am-bavako, mandra-pahamita tanteraka azy. Nesoriko tamin’ny vavako izany ary afaka misaintsaina ny hatsarany sy ny fanitarana rehetra.
I Renata dia nanana mofomamy tsara tarehy, matevina, fotsy, vitsy anaty valan-doko miolakolaka, mahitsy, manondro miakatra, somary volomparasy somary mena kokoa ny ambiny noho ny ambiny ny loha. Nentiko tamin’ny tanako ilay izy ary be dia be ny tatatra tsy mbola nokasihina. Fantany fa tiako ilay izy, dia nitazona ahy nilaza izy hoe: tianao ve ilay “masom-bolo” namboarinao? Io ilay habe tianao? Porofoy fa tia azy ianao ary minono ahy, ka lasa adala aho. Rehefa mitsoka ianao dia alaivo sary an-tsaina fa tsapanao ao am-bavanao izay tsapanao!
Nianjera tamin’iny vava iny aho, ka ny lohany ihany no nifoka, avy eo nidina aho mandra-pahatsapa fa nikasika ny tendako. Nentiko avy tany am-bavako izany ary nitazona azy toy ny popsicle, nataoko moramora ny vatana mafy, nokapohiko indray ilay izy, nanao fihetsehana mihetsika mihetsika avy eo an-doha ka hatrany afovoan’io akoho io, manao tsindrona eo am-bavako. misintona mangatsiaka ary mampivazivazy hatrany Renata: ity saka ity, somary matsiro amin’ny masoko, hainao tsara ny mitono tena, mahafinaritra, mahafinaritra aho fa hihinana toa anao tsy mbola nihinana, mitsako sipa ary mahatsapa am-bavanao izay azoko atoandro tsy ho ela. ianao!
Maloto-tena aho ka mitsako ny akoho amin’ny fahafinaretana. Isaky ny tonga ny akoho dia mivoaka ny vavako, dia mitomany izy. Niezaka ny mitsako an’io akoho lehibe io aho, satria te-hikoka hamely ahy, dia nanandrana nikapoka sy nitsoka toy ny vehivavy janga matihanina aho, mba hanao azy mampihomehy. Nitsakitsaka eran-tanako ny diany, ary tena henjana. Nitsako foana aho, dia nitoloko hatrany izy, mandra-pitroka ny akoho naneno ny vavako. Nihomehy mafy i Renata ary nihazona ny lohako, nanakana ahy tsy hisono azy ary nangataka ahy hijanona, satria raha manohy izany fomba izany aho dia ho avy tsy ho ela.
Nosintony aho ary nanoroka ahy tsara. Malalaka izy ary nilaza tamiko fa tia ny tsirony amin’ny akoho, mifangaro amin’ny fanorohana. Ary hoy izy tamiko: kambana efa vonona, izao dia hotanterahiko ny nofinofinao. Raha ny tena marina dia mbola tsy nohanina akory aho, efa nasiana zavatra teo amin’ny ramboko aho ary nanao masturbated, fa mbola tsy mbola nahitana akoho henjana sy tena izy tao amin’ny ampondrako, indrindra fa miaraka amina vehivavy mahafinaritra toa azy, mifikitra amin’ny fototry ny maneno.
Naka fimailo i Renata, nitafy haingana ny sarin’izy ireo, nipetraka teo ambony sofa, niaraka tamin’ilay hazo notondroiny ary nangataka ahy handroso eo ambony seza, nanatrika azy. Nitazona ny diany izy ary nanondro ary niangavy ahy hipetraka amin’ny diany: tongava am-bazaha, mipetraha eto ary afatory ny dick voalohany miaraka aminao ity voloko kely mampitony ity, te hahita ny tarehinao aho rehefa miditra aminao ny dieriko!
Niondrika aho mandra-tsapako ny diany nikasika ny varavaran’ny ampondrako, nanohy ny fihazonany ny diany i Renata, ary nitazona izany. Nasongadiko ny tongotro ho an’ny fampiononana lehibe indrindra ary nanandrana nampitony ny peratra kely nataoko aho, nanala ny lanjako kely, nanao sombin-tsokosoko hanomboka ny fidirana ao anatiko, nanitatra ny ramboko, izay tena tadiaviko. Tsy haiko hoe firy no nidirany, fa tsy nahatsapa fanaintainana tokana aho, ny fandoroana kely sy ny tsy fahatomombanana ateraky ny fitombohana izay efa nanomboka.
Nanome toky ahy i Renata ary nomeny toky haingana: milam-panina, mijanòna kely aloha mandra-pahazomanao azy, rehefa tsapanao ilay izy, aleo vetivety io, dia hangina aho ary rehefa tsapanao fa hisy ny akoho rehetra ao anatinao. Nanangana ny lohany izy, nitady ny vavako ary nanomboka nanoroka ahy tamin’ny fomba feno fitiavana sy tsy dia masiaka loatra.
Efa zatra ny halehiben’io refy io, ny oroka sy ny entany dia namela aina ahy ary navelako nandatsaka ny lanja bebe kokoa aho, ary nahazo sombiny hafa tao anatin’ny 23 cm aho. Tamin’ity indray mitoraka ity dia milamina sy malefaka. Nanova ny tongotro aho ary nandohalika teo anoloany, nandohalika aho, tamin’ny toerana mitaingina mpitaingina, hiatrika azy, io fiovana io no nahatonga andiana alahelo iray hafa hiditra ahy.
Hoy izy avy eo tamiko: tsy mila manahy momba ny hahazo bebe kokoa ianao, hitranga ara-boajanahary izany, andramo mitaingina ahy, amin’ity toerana ity, alao mora ary hiditra ny fitrokako ary hivoatra avy eo ianao. Nataony ny tanany niaraka tamin’ny tanany ary nitarika ny hetsiako izy, nanosihosy ny akany aho ary nitady ahy hiverina hanoroka ny vavany.
Nanomboka nitaingina azy aho ary mbola tsy nahazo ny akoho feno. Nandritra ny nitaingenany azy dia nanoroka ahy sy ny akoho izy, dia ny fihetsiky ny fiakarana sy ny fiakarana, niditra lalandava aho, fantatro izany satria nahafahako nahatsapa mafy sy nidirany, niditra lalina sy lalina tao anatiko, mandra-pahatongan’izany. Fotoana fohy taorian’izay dia niankina tamin’ny vatany ny ampondrako ary nipetraka teo am-pofoany aho.
I Renata dia tsy nanoroka ahy ary niteny hoe: Oay akama a, mangina tahaka an’io kely io mba ho zatra an’izany sy hahatsapa ny akiko rehetra ao aminao. Ny dick 23 sm eo dia mipetaka amin’ny rambonao daholo, manomboka izao, hataoko mitoloko anao ianao, toy ny fanaon’ny bitika kely rehefa hanina izy!
Saika tsy afaka nino aho, nipetraka teo am-pofoako aho, nifanatrika vehivavy lehibe, nanana endrika vavy, nokarakarainy tsara, volo lava, misy turbika mahafinaritra 2 izay nibontsina ny tratrako, kibo fisaka, gym, sitrana, misy marika kely mahafinaritra ary bikinis kely, izay fotoana izay nahatsapako tao anatiko, hazo be, henjana, 23 santimetatra efa tonga iray manontolo, hatreny amin’ny sampany ary tsy misy fanaintainana. Milamina ny sezako ary nanokatra tanteraka, manodidina an’io picona io. Afaka nahatsapa izany tanteraka aho, niandry ahy tao anaty, saika tao an-kiboko.
Nahatsapa ny halehiben’izany picona izany aho, niaraka tamin’ny 23 cm tao anatiko, nahatsapa izany mafy aho tao anatin’ny ampondrako, izay nahazo azy tamin’ny fahafinaretana lehibe sy tamin’ny fihoaram-pefy iray, nameno azy io sy namindroany. Avy eo dia notazoniny teo am-balahany indray aho ary nampodininy, ary niverin-dàlana tamin’io sisiny io aho, tsy nitondrany azy, ka dia nitohy mandra-pandevina ny vatan-kozako sy ny voadaba miverina aho. raha raha somary kely ivelan’ny trano, dia voajanahary.
Hoatran’ny hoe te-hahazo antoka izy fa tena izy. Ny fahatsapana an’izany horohoroana izany dia nanome fahafinaretana mahafinaritra ahy, nitsako naneno ny akerany ny ampondrako, nahatsapa feno fonosana aho, milamina tanteraka handray azy ary manodidina an’io picona io dia mahafaly, efa nanao izany rehetra izany! Ny fanandramana irery ihany no nanome ahy filana lehibe. Tsy azoko an-tsaina ny ho avy.
Nangataka ahy hiala izy, ary nilaza fa hohaniny aho amin’ny toerana rehetra fantany, talohan’ny nahatongavako ary tokony handà tsy handeha koa aho. Noraisiny ny tànako ary nentiny tany amin’ny efitranony aho, nasainy nandry teo am-pandriana teo amin’ny kiboko, ary nitampitampatra ny tongotro. Avy eo dia nangataka ahy izy mba hampisaraka ny randrako amin’ny tanany, nijanona teo aoriako, nametraka ny vavany indray teo amin’ny varavaran’ny ampondrako, namoaka ny lanjan’ny vatany ary nanomboka nanosika azy, izay tsy toerana mihitsy tokony hiala.
Nahatsapa aho fa ny cobona, ho avy, lalindalina kokoa sy lalina kokoa, manamafy, manosika ahy ao anaty, miditra sy hiditra, mandra-pitondrany indray ny vatany, manondro fa indray mandeha indray izy, ato amiko farany. , Renata dia miraikitra amin’ny vatany ny vatany. Tsapako tao ny ampondrako izay mivelatra be dia be ny mandray azy ary safotra amin’ny zakariny, ny vatany mikambana amin’ny ahy, ny nonony mikitika ny lamosiko, ny lelany ary ny fofonain’ny fofonaiko amin’ny sofiko sy ny tendako , izay nanosika ahy hiala amin’ny tongotra mankany an-doha.
Nataony niverina kely ny lohako ary nanoroka ahy indray. Avy eo izy dia nanomboka namindra ny andilany, ary nampiditra ny zakariny ka tsy tao amiko. Nanoroka ahy izy, nanosika ny soroko ary namihina ahy ary nisakafo ahy. Nalefitra tanteraka aho ka nanjaka, mahatsapa fifaliana lehibe tamin’io, ankoatry ny fientanam-po nateraky ny zaza ara-boavavy izay vehivavy manana dick, ny lehibe toa azy ihany koa.
Nahatalanjona ianao satria tsy nisy fanaintainana, faly fotsiny aho, ny fihetseham-po fotsiny fa ny fahatsentsenana sy ny fandehanan’ny akoho no nahatonga ny ampondra, nanintona ahy. Niditra tao izy, nanoroka ahy, nametaka ny lelany teo am-bavako, nitolomoka sy niteny hoe: maly, inona ny asio mahafinaritra, tena mafana sady malefaka, hohaniko ianao matsiro anio, hianjera amin’ny dick-ko ianao, ny borikinao tsy mba nahatsapa mihitsy tsy misy toa ny hataoko aminao anio. Mahatsapa ny masoko hiditra ao aminao, tsy tianao izany? Fantatro ianao fa ianao, tsapako fa tselatra avy amin’ny diako, faniriana madio ny tavanao ary koa ny volanao.
Tena nihetsi-po tokoa aho, mahatsapa an’izay rehetra izay, tsy nieritreritra velively aho fa azo hohanina toy izany ary tena tiako tokoa, ho ahy, tamin’io fotoana io dia tsy hitsahatra hihinana ahy intsony izy. Avy eo dia nitazona ahy i Renata ary nanakodia ny vatako niaraka tamiko, mba hijoroany, izy avy ao aoriana sy izaho teo anoloany, nangataka ahy izy mba hampiakatra ny tongony izay eo ambony, nanao izany rehetra izany izy nefa tsy naka ny dickany avy tamin’ny ampondrako. , namihina ahy ary namerina ahy, tamin’io toerana io dia nihanatanjaka sy haingana kokoa izy, saingy tsapako fa tsy niditra ahy tanteraka ny diany, toy ny tamin’ny teo aloha, na dia tena matsiro sy mahafinaritra aza.
Amin’ny toerana misy anay dia efa milentika aho ary i Renata ihany koa, ny valin’ny “fety” ataonay, dia nanodinkodina ahy izy ary natolotro azy ireo. Nesorin ‘i Renata tamiko ny vavony, dia navelany nandry aho, nefa izao dia nangataka ahy hampidina ny tongotra izay natsangana izy, nisintona azy, mba hampitony ilay lohalika. Avy eo dia nandry ny antsasaky ny sisiko aho, niaraka tamin’ny tongotra iray ary ny lohany kosa dia nijanona teo afovoan’ny feny an-tongotra izay mbola nijanona izy, dia nitarika ny diany indray nankeo amin’ny ampondrako aho ary nalaiko daholo. miaraka amina telo fotsiny.
Nahatsapa ny molony nanosika ny kibon’ilay tongotro aho, nitazona ahy tamin’ny feny izy ary nikatona tamin’ny kibony tao anaty ahy indray. Ity toerana ity dia nanome ahy fahafinaretana hafa sy tena mahasalama, tsy fantatro raha noho ny fomba nidirany ny diany, na taiza tao anatiny aho rehefa napetrako tao amin’ny ampondrako, saingy nampitandrina azy aho fa raha mitohy toy izany dia tsy ho ela aho . Nilaza izy fa ny ankamaroan’ny lehilahy izay nohaniny dia nankafiziny.
Avy eo dia nijanona izy, nalaiko, napetrany teo an-damosiko, nangataka ahy hitsangana ary hihazona ny lohako miondrika (Nahazo akoho akoho aho) ary naveriko tao anaty ampondra daholo ny zava-drehetra. Nahatsapa fa vy mafy aho, nanitatra ny ramboko ary niditra tao amin’ny ampondrako, mandra-pihetsiketsika azy indray ny vatany. Efa tao anaty ato anaty ahy indray ny akoho ankehitriny, afaka nahatsapa izany aho, nanokatra ahy, nanosika ahy, nihinana tamiko, tena nahafinaritra, satria nihinana ahy izy ary nanana sangan’asa mahafinaritra ahy. Niditra tao izy dia nalainy, toy ny hoe izaho no mpijery farany eto an-tany, tena vonona hanome ahy fahafinaretana be dia be aho, mihevitra aho fa mahatsapa ihany koa. Tsapako fa niditra ny saiko ny ahy, toa tsy afa-po sy vonona ny handefa azy izy.
Mbola akoho mifangaro, dia nanomboka nitazona ahy tamin’ny kitrokely izy, nisintona ahy ho akaiky azy, nanao ny tapa-tongony – raha azo atao – vao miditra ao anatiny aho, dia nisintona ahy izy ary nihinana ahy tamin’ny hafainganam-pahefana mahery kokoa. Isaky ny mahita ny vatany dia manondro fa feno ao anaty ahy ny diany, dia mamoaka feo izy io, manondro ny tanjaky ny korontana. Renata dia milina fanaovana firaisana mahay miasa amin’ny boriky. Fantany ny fomba hanaovana izany ary tiako izany.
Mba hamaranana an’io toerana io dia noraisiny ny tongotro ary natsangany, napetrany teo an-tsorony. Dia nandry teo an-damosiko avy eo, niaraka tamin’ny tongotro mahitsy sy mahitsy, ny tongotro teo an-tsorony. Nalalaka be ny ampondrako ary nibaribary avokoa ny ampondrako. Niankina kely i Renata, mandra-pahafahany nametraka ny tanany teo am-pandriana ary nahita ahy izy, nihinana ahy, nametaka ny masony tsy harahina, haingana kokoa aza. Ankehitriny, ankoatry ny fahafinaretana tsapako rehefa nihinana aho dia nahatsapa ho mafana kokoa ny ampondrako, rehefa nihinana ahy izy. Mahitsy sy henjana ny zakariny, niditra ny ramboko nanokatra ny ati-tanako anatiny ary nahafaly ahy izany.
Rehefa avy nisakafo toy izao aho dia mieritreritra fa reraka i Renata ary nangataka ahy hanova ny toerana misy ahy indray. Niala teo am-pandriana izahay, nitsangana sy niely ny tongotro, nametraka ny tanako teo ambonin’ny rindrina ary tamin’ny fangatahana nataony, dia nandrombaka ny ampondrako. Nofososiny tamin’ny alalako ny vavany nitady ny fidirana amin’ny ramboko ary raha vao nahita azy dia nanandrana nitarika izany tao izy ary nisy dian-kapoka roa na telo, dia efa nanjavona fatratra ny tsokosoko tao anaty kiboko.
Nanomboka nitazona ahy teo am-balahako i Renata ary nitazona mafy ny diany tao amiko, satria mitovy ny habe toa azy, ny haavon’ny fitomboan’ny fanamorana, ankoatry ny toerana izay nahitako ny tenako. Mahafinaritra ny fahafinaretana nomen’ny akany ahy rehefa miditra sy miala amiko. Milamina tanteraka ny ampondrako ary misokatra rehefa mahazo an’io sary io amiko. Tena faly aho ary faly tamin’ny fahafinaretana nomeny ahy. Faly aho fa tena nihinana tokoa aho.
Nohaniny toy izao nandritra ny fotoana kelikely izy, mandra-pahatongan’ny fijanonany dia nangataka ahy hijanona eo amin’ny lafiny efatra, teo amin’ny sisin’ny fandriana, satria io no toerana tena tiany indrindra, hoy izy fa tena faly izy mahita ny dick nanjavona tao anaty ampondra iray ary te hanao izany. izany amiko. Narahiko ny fangatahany, nangataka ahy izy hampihena tanteraka ny vatan’ny vatako, mandra-pandihako ny tratrako amin’ny fandriana. Izany dia namela ahy tamim-balahana tanteraka ary niseho taminy teo amin’ny sisin’ny fandriana. Nomeny fofona 2 na 3 teo an-damosiko izy ary nilaza tamiko: tsara tarehy ny mahita anao toy izany, manaiky rehetra sy miharihary, miaraka amin’ny ampondranao malalaka, miandry ary maniry ny fidirako hiditra ao aminao.
Avy eo dia nametaka ny tongony teo am-pofoako izy, nanondro izany teo am-baravaran’ny ampondrako, nitazona ahy tamin’ny valahany ary nanomboka nametraka ahy tao izy. Nanao dian-kapoka miadana izy, ny tsirairay avy, ary niditra sy nivoaka. Tsapako ny tanany nisintona ahy teo am-balahany nanohitra azy, ankoatr’izay nanosika ny vy matevina ary niditra ny ampondrako. Notohizany toy izany mandra-paosin’ny pelvis ny ampondrako. Izany dia nataony, nitazona ny tsindry amin’ny paositra izy, ary nitazona ny vavany manontolo tao anaty ahy.
Ary hoy izy tamiko: hanomboka hiditra moramora sy miandalana aho, mba hahafahanao zatra azy, satria lehibe ny diako, betsaka ny mimenomenona fa rehefa manosika mafy an’io aho, dia manelingelina na mandratra izany, raha manjo anao izany, ampahafantaro ahy fa mijanona aho. Avy eo dia nanomboka ny antsa-piraisan-tsasatra henatrao tonga hatrany an-tsako aho. Izaho dia teo amin’ny lafiny efatra rehetra, miaraka am-bavako ary niharihary tanteraka sy nanaiky azy. Rehefa nampiditra ny akany tao amiko izy dia nahatsapa ny halavan’ny tariby nanenjika ahy mandra-piteniny indray ny vatany ary namely ny ahy ny kitapony.
Avy eo dia niverina izy ary naka ny diariny avy tao amin’ny ampondrako mandra-pialany izany saika rehetra, ary avy eo nametraka azy avy hatrany miadana, mandra-pahatongan’ny farany, tao anaty ahy indray. Tiako ny fahatsapana an’izany, nihinana ahy tamim-pitiavana, fa mafy orina, nefa tsimoramora, fa na ny tahom-baravarana aza dia nanindry ahy, tamim-pitiavana be, satria nanao fihetsehana miadana aho, hametraka izany ato amiko, tsy misy ahy mahatsapa fanaintainana.
Tiako ny nanome azy azy tamin’ny lafiny efatra, rehefa niditra ahy ny akoho naneno, dia nisy feo kely rehetan’ny vatany nikapoka ahy. Rehefa nitranga izany dia nahatsapa mafy ny dick-ko aho, nitazona ahy tao anatiny ary nisokatra tokoa ny ampondrako ary milentika manodidina ny diany. Nihinana ahy toy izany nandritra ny fotoana kelikely izy, ary nilaza tamiko fa ny fahitana azy nahita ahy tamin’ny efatra rehetra ary nijery ny diany manontolo dia nanjavona tao anatin’ny ampondrako, mahafinaritra, fa nanana boriky tena tsara sy boribory ary mahitsy aho, araka ny filazany azy, Mafana ny malefaka ary malefaka sady malefaka. Ary nohamafisiny fa nilaza aho fa izaho no tsara indrindra nohaniny nandritra ny fotoana ela, fa tiako izany, fa raha tohizako kosa fa tsy handà sy hankafy azy io aho.
Tao anatin’izany dia najanony ny nametrahany ahy tamin’ny lafiny efatra, nisintona ny akanjony avy teo amin’ny ampondrako izy, nisintona ahy tamin’ny tànany, nandray ahy tany amin’ny efitrano fandraisam-bahiny indray izy, nipetraka teo amin’ny sipa ary nangataka ahy hipetraka miaraka aminy ao an-damosiny , fanombatony ny akoho tao anaty ramboko indray. Nipetraka aho rehefa nangataka izy, nitarika ny diany mankany amin’ny fidirana amin’ny ramboko ary tamin’ny tadio iray, dia namoaka ny lanjan’ny vatako aho ary nanjary nanjavona haingana tao anatin’iritra ny akoho.
Nahafinaritra ahy ny nahatsapa izany nidirany tamiko, satria nahalala fa izaho no mifehy ny fidirana amin’ny alàlan’ny fidirana, izaho no nanaiky fa io vy io no nampidiniko ary niditra tao amin’ny farany izy. Rehefa niditra ny zava-drehetra, dia nihazakazaka nivezivezy aho ary nitazona ny tanako teo ambanin’ny tsikiko fotsiny, ary azo antoka fa tsy nisy na inona na inona.
Faly i Renata tamin’io ka naneso ahy: indrisy, ianao tsy manam-pitiavana! Tonga indray mandeha izy tsy nitaraina. Fomba kely maloto avelanao aho. Nataony mihitsy aza ny tanany mba hahazoana antoka fa ao anatiny daholo ny zava-drehetra. Mahafinaritra anao ny manome izany amiko, sa tsy izany? Hoy izy ary nokapohiko teo anilan’ny ampondrako. Avy eo dia nangataka ahy izy handidy kely ny hetsika, mipetraka sy manangana ny vatako eo amin’ny diany. Tsy niangavy aho, niondrika aho mba hanohana ary nanomboka niverin-dàlana, miakatra sy midina, miditra ao anaty zakariny aho ary miala amiko, satria niasa aho, dia nandeha moramora aho, satria Tiako ny fahatsapana fa ny fidirana miadana izay vy mahery nateraky ny ramboko, dia niakatra aho mandra-pahatsapa fa handositra aho ary nidina aho mandra-paha-tsy nandehako intsony.
Fa tena mahafinaritra, tena nahafaly ahy, nampiasaina an’io picona mafy io aho, izay tsy kely miaraka amin’ny 23 santimetatra aminy. Toa natao baiko ho an’ny ramboko iny, satria lehibe be io mba handrindrako, nefa tsy manelingelina ahy na manelingelina ahy. Rehefa nipetraka tao aho hatramin’ny farany dia afaka nahatsapa izany tanteraka aho, toy ny vy matevina, nikosoka ahy tamin’ny fomba mahafinaritra tao anatiny, heveriko fa ny fahatsapana ho akaiky dia azo atao amin’ny fandefasana azy velona.
Mitombo ny fahafinaretana tsapako mandra-piteniko amin’i Renata fa raha manohy an’izany dia ho nankafiziko. Nanontany ahy haingana izy mba hiala tany ambony. Dia nandry teo amorom-paty tao amin’ny efitrano fandraisam-bahiny izy ary niantso ahy: raha ho avy ianao, andao tonga, mipetraka eo manatrika ahy aho ary mitaingina mahafinaritra. Nipetraka teo aho, nandohalika teo amboniny, nametraka tongotra iray teo amin’ny lafiny iray, nihazona ny vavany ary nitarika azy ho any amin’ny ampondrako, izay nahazo azy tamim-pifaliana, tsy nisy fombafomba, mora be, mandra-nipetraka teo aho indray ao anatiny, atsofohy mankany anaty tohatra ao anaty tsato-ko. Tiako ny nahatsapa izany tao anatiko rehetra, ankoatry ny fahafinaretana naterak’izany, nahatsapa hery aho amin’ny fahafahany mitelina azy rehetra.
Avy eo, rehefa nanontany ahy izy dia nanomboka nitaingina azy aho, tamina hetsika miadana sy fohy, niezaka ny hihazona ny fatrany indrindra ao anatin’izany. Tsy haiko ny manazava ny antony, fa ny fahafinaretako tao anatin’io toerana io dia lehibe lavitra noho ny hafa rehetra. Tsy haiko raha avy eo nidina ny fahitana sy nahita lehilahy lehibe, niaraka tamin’ny tratrany be vita tamin’ny vy, tamin’ny fotoana izay nahatsapany ny vy mavesatra sy mahery teo am-bavako. Na na, noho ny haben’ny akoho sy ny toerako izay, dia nanohina ahy tao anaty toerana izay nahafinaritra indrindra ahy izany.
Fantatro fa tsara ihany izany, nitaingina fahafinaretana sy filàna tamin’io akoho io aho, izay nanana vehivavy lehibe nikapoka azy. Nitoloko aho, niondrika sy niverin-dalana, niankohoka sy nandohalika kely, niankina tamin’ny vatanako ary napetrako teo an-tratrany ny tanako, namihina sy nanosika azy, raha nahatsapa ny diany lehibe tao anatiko. .
Indraindray dia nitsahatra nitaingina aho ary nipetraka, nitelina azy hatrany amin’ny tohina, hahatsapa azy tanteraka tao anatiko, nanome fahafinaretana tsy misy toa izany aho. Vao nitombo ny faniriako, nisento sy nitoloko aho, nankafiziko ny zavatra rehetra tao anatiko. Tamin’iny fiakarana vaovao iny dia nitaingina ny akany aho, nalaiko saika feno ahy io ary niverina, nipetraka teo amboniny, nanao ny halavany manontolo indray dia nanjavona indray teo amin’ny ramboko, ary tamin’io fotoana io dia natelin’ny gluttony ary nanamontsina ny akany. nitombo ihany ny fahafinaretako ary toy izany koa ny fanaoko.
Nilaza tamin’i Renata aho fa ho faly raha manohy toy izao izy, dia nangataka ahy hanohy sy hankafizako matsiro miaraka amin’ny akoho ao anatin’ilay ampondrako ary nanomboka namporisika ahy bebe kokoa, niteny hoe: mandehana, mivaha miaraka amin’ny dick ao amin’ny ampondranao, mahatsapa tsara mafy ao anatinao ary ankafizo ny tsimoka. Tiako hidiran’ny ampondranao ianao, miaraka amin’ny akoho mikikitra aminao ao anaty hazofijaliana ianao.
Vao mainka nampientam-po ahy izany, nipetraka teo aho mandra-pahatongan’ity farany akoho ity ary nihodina tamin’ny hetsika fohy, mba hahatsapako fa nalevina tanteraka tao amin’ny ampondrako. Nanohina ahy ny akoho nanakodia ahy rehefa nihodina aho, nahafeno fahafinaretana sy faniriana ho avy. Tao amin’ny rahona aho, feno fahazotoana amin’ny fahafinaretana tsapako, ary tsy mahafehy ny vatako, ny filàzako ary ny fahatsapana tsapako. Fantatro fotsiny hoe tena mamy izany, tia azy aho ary aleo noho ny zavatra nataoko hatramin’izay. Handeha hipoaka aho ao anatin’ny fotoana fohy.
Nahatsapa aza aho fa tsy ho afaka mirakitra ny tenako intsony ary ho avy aho, hoy aho tamin’i Renata hoe ho avy aho ary hanome wiggle farany iray, mipetraka eo amin’ilay tohina ao amin’io picona io aho, handevina ny 23 cm tanteraka ao anatiko ary milamina aho, tsy mihetsika. Ny faniriako dia lehibe tokoa ka na dia tsy nisy fihetsehana aza, dia tonga ihany ny fahafinaretana. Nahafinaritra sy mahafinaritra tokoa izany! Nitazona ahy i Renata: mandehana, mankanesa miaraka amin’ny dick-ko ao anaty ampondranao, andao! Mankafy toy ny mpivaro-tena dia tokony hikambana amin’ny akoho lahy. Avia fa handeha aho!
Voalohany, nahatsapa mafy ny vatako aho, ny fipoahana fahafinaretana nitazona ny saiko avy any ambony ka hatrany ambany, tsapako ny akany henjana, niaraka tamin’ny 23 cm nalevina tao amin’ny ampondrako izay nanohina ahy. Nahatonga ahy bebe kokoa izany fihetseham-po izany, satria nanomboka nitsinkafona tsy an-tsitrapo ny ampondrako, ny henoko izay mafy dia nanomboka nandao, ny fofonaiko dia nanjary niroborobo ary nilatsaka ny hiram-pitiavana, tamin’io fotoana io nitadiavako ny fofonosako, nandefa ireo jet voalohany. mipoka avy eny ambony akoho aho.
Nimenomenona tao anaty ampondra aho, tsy nisy nikasika ahy akory, io zohy mahafinaritra io no nanohina ahy. Nitsinjaka naneno an’io akoho io ny boriko, tahaka ny hanaikitra azy io, sady mikapoka azy avy eo amin’ny fototra. Nandoka ny vavakeliko, nandroaka ny firaisana rehetra vokatry ny faniriako. Mamelombelona izany, tena mahafinaritra ary hatreto, ny cumshot tsara indrindra nananako.
Mihena tsikelikely ny rivo-piainana, niato ny ampondrako ary nihitsoka ny akoho. Efa tonga teo amin’ny ampondra aho, nametraka cum maro be tany an-kibon’i Renata sy ny tratrany. Mbola teo am-bavany tanteraka ny diany aho. Renata tamiko nilaza hoe: mijanòna vetivety mandra-pahafanao Avelao ny zana-driko ao mandritra ny fotoana kelikely. Nitsiky tamin’ny tavako aho, tena faly tamin’ny zavatra nataoko sy tsapako.
Niondrika aho, niezaka ny hitazona ahy foana ny akoho Renata, nikaroka ny vavany aho ary nanome azy oroka lalina sy fankasitrahana lalina izay nomeny ahy. Niala teo aminy aho ary namaoka taratasy ary nanontany ahy tamin’ny endrika maharary indrindra sy ny pidona be dia be: kitten, avelao aho hihinana anao bebe kokoa, te-hiangona ao anatin’ny ampondranao aho, azoko atao ve?
Tsy hanohitra fangatahana toy izany mihitsy aho, saingy te hamerina ny fahafinaretako tsapako. Nanontany azy aho hoe: toerana inona no tokony ho toerako? Nasainy nandohalika teo amin’ny seza aho, nipetraka, nandroso, saika ny efatra. Nataony raha tsy milay ilay fimailo, natsatony tamin’ny vavako ny vodilako, mandra-pahitany ny fidirana amin’ny ampondrako, nitazona ahy tamin’ny valahany izy ary nanomboka nametraka an’io zalahy ngeza mahafinaritra io tamiko.
Raha ny fanaoko azy dia niditra moramora izy ary tsy ela dia nandalo ahy indray. Avy eo i Renata dia nanomboka nametraka izany haingana sy mavitrika ao amin’ny ampoko. Niseho izy fa tena henjana, satria nahatsapa mafy indrindra aho ary ny fanafihany tao anatiko. Nihinana ahy izy ary niteny hoe: wow, inona no asio mahafinaritra mahafinaritra anananao ary malefaka sy mafana. Tsara tarehy ny ampondrany, mampihomehy ahy tokoa raha mahita ny dieriko ho levona tanteraka ao anatiny. Tena faly aho, tsy ho ela aho hitsidika anao.
Nihinana ahy nandritra izany fotoana izany i Renata nandritra ny fotoana elaela, ka hatramin’ny farany dia nisintona ahy hatrany izy. Nitombo ny filany ary niaraka tamin’ny hafainganam-pandehan’ny tadin-doko, mandra-pahatongan’izany tamin’ny voalohany dia nanintona ahy mafy kokoa izy, nandevina ny akany nanakombona ny ampondrako ary nanambara ny hafaliany. Notampenany ny valahako, nanandrana ny hikosoka ny zakariny izy sady nitoloko bebe kokoa. Rehefa nitodika tany aminy aho, dia tsy hitako fa ho avy izy, nefa fantatro fa henjana izany noho ny fomba nisintohany ahy, nampidiriny aho ary narosoniko, nitaona ny tadiny teo amin’ny vodiko.
Taorian’ny fifalifaliana dia mbola tafiditra tao amiko izy, fa nitazona ahy kosa izy, ka nasandratro ny vatako ary nitazona ny lamosiko tamin’ny tratrany sy ny kibony aho, ary tsy nesoriny ny dick. Namadika ny lohany aho ary nanoroka ahy lava teo am-bava, namihina sy nisintona ahy teo izy raha nanoroka ahy izy. Tsapako ny fanorohanany, ny nonon-dRadoman’ny vehivaviny izay nanohina sy nanosika ahy tao an-damosina, tao anatin’izany fotoana izany dia nahatsapa ny akerany lahy aho, mbola henjana, tao anatin’ny tsikiko.
Nangataka anay izy mba hijanona ho toy izany, eo amin’io toerana io, hamihina sy oroka, mandra-pahatonga ny akany hanala azy ary hivoaka avy amiko. Tsy haiko hoe mandra-pahoviana io fizarana fifanakalozana am-pitiavana sy fitiavana io dia maharitra, fa tiako izany. Tiako ny nahatsapa ny hafany, ny filàny, ny vatany dia nifamihina nanohitra ny ahy. Andramo ny oroka maloto. Nihanalefaka ny volony, nihena ny hatindry ary vokatr’izany dia nanery ahy izy, saingy mbola nanoroka sy namihina ahy izy, nisintona ahy, mandra-pahatongan’ny diany miha-mavesatra ary namela ahy irery.
Nisintona ahy avy hatrany i Renata, nitodika ahy nifanatrika, namihina ahy, nampifandray ny vatantsika ary nifanindry, nifanosika ny lambanay, izay malefaka sady tsy nahatsiaro tena, nanoroka ahy indray izy ary nanoroka ahy indray ary Hoy izy tamiko: tiako ianao, malalaka be ianao ary liberaly, ny borikinao matsiro, mafana, malefaka ary malefaka, tsara tarehy ny ampondranao, miverena imbetsaka araka izay tianao, mampanantena aho fa hamerina ilay fatra.
Noraisiny ny tànako aho, nentiny tany amin’ny efitra fandroana, nomeny fandroana tsara, nitafy akanjo, nanao akanjom-bola izy, nandoa vola, nandoa ahy tao am-baravarana, nanoroka ahy farany ary lasa. Miaraka amin’ny fandoroana kely ny ampondrako, izay andro vitsivitsy lasa izay, dia efa nohanin’ny feon-javamaniry lehibe izy io.